DWG Qalabka Soo kabashada. AutoCAD Dayactirka & Soo Celinta Software.
DataNumen DWG Recovery waa ugu fiican AutoCAD DWG qalabka dayactirka iyo soo kabashada adduunka. Waxay dayactiri kartaa AutoCAD musuqmaasuq ah DWG faylasha iyo dib u soo kabashada inta ugu badan ee xogtaada ee suurtogalka ah, taas oo yareyneysa luminta musuqmaasuqa faylka.
maxaad DataNumen DWG Recovery?
Heerka soo-kabashada waa most shuruudaha muhiimka ah ee a DWG soo kabashada. Iyada oo ku saleysan tijaabooyinkayaga dhameystiran, DataNumen DWG Recovery leeyahay heerka ugu wanaagsan ee soo kabashada, aad uga fiican tartamayaasha kale ee suuqa ku jira!
Baro wax badan oo ku saabsan sida DataNumen DWG Recovery sigaar cabaya tartanka
Xalka Raacista Khaladaadka AutoCAD Sababtoo ah musuqmaasuq DWG files
Xalka “Sawirka sawirada ma ansaxsana” Khalad
Xalka “Ciladda Gudaha [emailka waa la ilaaliyay]: eOutOfRange ”Khalad
Xalka “Non Autodesk DWG”Khalad
Noocyada Muhiimka ah ee DataNumen DWG Recovery v3.0
Taageero si dib loogu soo celiyo AutoCAD R14 ilaa 2021 DWG files.
Taageero si aad uga soo kabato walxaha soo socda gudaha DWG faylasha: BLOCK, POINT, LINE, ARC, CIRCLE, ELLIPSE, SPLINE, XLINE, RAY, SOLID, 3DFACE, LWPOLYLINE, POLYLINE (2D), POLYLINE (3D), POLYLINE (PFACE), POLYLINE (MESH) 2) , VERTEX (3D), VERTEX (MESH), VERTEX (PFACE), VERTEX (PFACE FACE), TEXT, MTEXT, TRACE, ATTRIB, ATTDEF, ENDBLK, SEQEND, INSERT, DIMENSION (ORDINATE), DIMENION LAGU SAXIIXAY), DIMENSION (ANG 3-Pt), DIMENSION (ANG 2-Ln), DIMENSION (RADIUS), DIMENSION (DIAMETER), HOGAAN, dulqaadasho, BLOCK CONTROL OBJ, MADAXA XIRAN, LAYER CONTROL OBJ, LAAY, STYLE, LTYPE CONTROL OBJ, LTYPE, VIEW CONTROL OBJ, VIEW, UCS CONTROL OBJ, UCS, VPORT CONTROL OBJ, VPORT, APPID CONTROL OBJ, APPID, DIMSTYLE CONTROL OBJ, DIMSTYLE.
Taageero si looga bogsado lost & waxyaabo laga dhex helay DWG files.
Taageero si looga soo kabto walxaha la tirtiray DWG files.
Taageero soo kabasho DWG sawir ka soo baxarary faylal marka musiibo xogta dhacdo.
Taageero si loo soo saaro feyl go'an gudaha DWG qaab iyo qaab DXF.
Taageero loogu talagalay soo saarida faylka go'an ee AutoCAD R14 illaa qaabka 2017.
Taageero lagu dayactirayo DWG faylasha ku jira warbaahinta khaldan, sida diskiga diskiga, Zip saxannada, CDROM-yada, iwm.
Taageero si loo dayactiro qayb ka mid ah DWG files.
Taageero si loo helo oo loo xusho DWG faylasha lagu hagaajinayo kombiyuutarka deegaanka.
Ku taageer isdhexgalka Windows Explorer, markaa waad dayactiri kartaa AutoCAD DWG ku fayl garee liiska macnaha guud ee Windows Explorer si fudud.
Isticmaalka DataNumen DWG Recovery inuu ka soo kabsado AutoCAD musuqmaasuq DWG files
Marka aad AutoCAD DWG faylasha waa la musuqmaasuqay ama la dhaawacay oo si caadi ah uma furi kartid, waad isticmaali kartaa DataNumen DWG Recovery si loo baaro DWG faylasha iyo soo kabsado xogta ugu badan iyaga intii suurto gal ah.
Fiiro gaar ah: Kahor intaadan soo kaban wixii musuq ama waxyeelo ah dwg faylasha leh DataNumen DWG Recovery, fadlan xir wixii barnaamijyo kale ah ee wax ka beddeli kara dwg files.
Xulo musuqmaasuqa ama waxyeellada dwg faylka la soo celinayo:
Waad ku dari kartaa dwg si toos ah magaca faylka ama guji kan
badhanka si aad u hesho dwg faylka lagu soo celiyo kombuyuutarka maxalliga ah.
Haddii aad ogtahay qaabka isha ay waxyeello ka soo gaadhay DWG faylka, markaa waxaad ku cayiman kartaa sanduuqa iskujira:
Sida caadiga ah, waxaa loo dejinayaa "Auto Determined", oo macnaheedu yahay DataNumen DWG Recovery falanqeyn doonaa oo go'aamin doona qaabkeeda si otomaatig ah.
Xilligan qaababkan soo socda ayaa lagu taageerayaa ilaha DWG faylasha:
Marka la eego, DataNumen DWG Recovery badbaadin doonaa go'an dwg fayl u gal fayl cusub oo lagu magacaabo xxxx_fixed.dwg, halka xxxx uu yahay magaca isha dwg faylka. Tusaale ahaan, il ahaan dwg faylka Waxyeellodwg, Magaca asalka ah ee faylka go'an waa la dhaawici doonaa_fixed.dwg. Haddii aad rabto inaad isticmaasho magac kale, markaa fadlan dooro ama u dhig si waafaqsan:
Haddii wax soo saarka faylka go'an uu leeyahay.DWG kordhinta, markaa DataNumen DWG Recovery soo saari doonaa DWG format.
Haddii soosaarka faylka go'an uu leeyahay .DXF kordhin, markaa DataNumen DWG Recovery waxay ku soo saari doontaa qaab DXF ah.
Waxaad ku cayiman kartaa qaabka feylka go'an ee soosaarida sanduuqa iskujira:
Sida caadiga ah, haddii aadan cayimin qaabka feylka wax soo saarka, markaa DataNumen DWG Recovery isticmaali doonaa qaab isku mid ah sida isha DWG gudbiso.
Waqtigan xaadirka ah qaababka soo-saarka ayaa la taageerayaa:
batoonka, iyo DataNumen DWG Recovery doonaa start iskaanka iyo soo kabashada ilaha dwg faylka. Bar horumarka
Kadib dib u soo kabashada, haddii isha dwg faylka si guul leh ayaa loo soo kaban karaa, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan oo kale:
Hadda waxaad furi kartaa go'an dwg ku fayl garee AutoCAD ama wixii kale dwg yutiilitida
DataNumen DWG Recovery 3.0 waxaa la sii daayay 3-da Maajo, 2021
DataNumen DWG Recovery 2.1 waxaa la sii daayay Diseembar 16, 2020
DataNumen DWG Recovery 1.9 waxaa la sii daayay Nofeembar 4th, 2020
DataNumen DWG Recovery 1.8 waxaa la sii daayay Juun 30th, 2020
Taageero si dib loogu soo celiyo AutoCAD 2018 illaa 2021 DWG files.
DataNumen DWG Recovery 1.7 waxaa la sii daayay Nofeembar 19th, 2019
DataNumen DWG Recovery 1.6 waxaa la sii daayay Abriil 19, 2018
Taageero si dib loogu soo celiyo AutoCAD 2015 illaa 2017 DWG files.
DataNumen DWG Recovery 1.5 waxaa la sii daayay May 29, 2014
Taageero si dib loogu soo celiyo AutoCAD R14 ilaa 2003 DWG files.
DataNumen DWG Recovery 1.1 waxaa la sii daayay Maarso 31, 2014
Taageero si dib loogu soo celiyo AutoCAD 2004 illaa 2006 DWG files.
DataNumen DWG Recovery 1.0 waxaa la sii daayay Janaayo 7, 2014
Taageero si dib loogu soo celiyo AutoCAD 2010 illaa 2014 DWG files.
Taageero si aad uga soo kabato walxaha soo socda gudaha DWG faylasha: BLOCK, POINT, LINE, ARC, CIRCLE, ELLIPSE, SPLINE, XLINE, RAY, SOLID, 3DFACE, LWPOLYLINE, POLYLINE (2D), POLYLINE (3D), POLYLINE (PFACE), POLYLINE (MESH) 2) , VERTEX (3D), VERTEX (MESH), VERTEX (PFACE), VERTEX (PFACE FACE), TEXT, MTEXT, TRACE, ATTRIB, ATTDEF, ENDBLK, SEQEND, INSERT, DIMENSION (ORDINATE), DIMENION LAGU SAXIIXAY), DIMENSION (ANG 3-Pt), DIMENSION (ANG 2-Ln), DIMENSION (RADIUS), DIMENSION (DIAMETER), HOGAAN, dulqaadashada, BLOCK CONTROL OBJ, MADAXA XIRAN, LAYER CONTROL OBJ, LAYER, STAY, STYLE, LTYPE CONTROL OBJ, LTYPE, VIEW CONTROL OBJ, VIEW, UCS CONTROL OBJ, UCS, VPORT CONTROL OBJ, VPORT, APPID CONTROL OBJ, APPID, DIMSTYLE CONTROL OBJ, DIMSTYLE
Taageerada soo saarida faylka go'an ee AutoCAD R2.5, R2.6, R9, R10, R11, R12, R13, R14, 2000 illaa 2014.
Ku taageer isdhexgalka Windows Explorer, si aad u dayactirto Muuqaalka DWG ku fayl garee liiska macnaha guud ee Windows Explorer si fudud.
Dayactir oo soo ceshto sawir Photoshop musuqmaasuq ah (PSD, PDD) faylasha.